Nagu saabsan - Fujian Bamboo Dahab ah Warshadaha Co., Ltd.
Fujian Baasaboorka Warshadaha Co., Ltd.
waxaa la aasaasay sanadkii 2011 wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhan 133,400 mitir murabac ah. Warshadu waxay ku taal magaalada Nanjing, magaalada Zhangzhou ， Gobolka Fujian halkaas oo ah meesha ugu fiican ee koritaanka bamboo. Waa warshad cusub oo bamboo bamboo iyo shirkad hawleed ujeedadeeduna tahay "kor u qaadista hannaanka ilaalinta deegaanka ee adduunka iyo yaraynta cunnada kheyraadka deegaanka".
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay 10 khabiir oo u heellan dib-u-cusbooneysiinta baaritaanka bamboo, 11 naqshadeeyayaasha sare, 26 farsamo yaqaanno. REBO waa magaca sumadda, wuxuu ku takhasusay faafinta dhaqanka bamboo dhaqameedka iyo qaab nololeedka hal-abuurka leh. Maaddaama ay tahay alaab-qeybiye dekedda dibadda ah, suuqa dibedda wuxuu daboolayaa Mareykanka, EU, Mideast, Australia, Aasiya, Koonfurta Ameerika, iwm.
11 naqshadeeyayaasha sare
26 farsamo yaqaan
REBO (Fujian Golden Bamboo Industry Co., Ltd) waxay ku takhasustay R&D, waxsoosaarka, iyo suuqgeynta xargaha gogosha gogosha leh ee gogosha leh, sagxadda dhulka, gogosha xirashada, looxa fardaha deggan, dogob, jooniska, deedka, iyo wixii la mid ah.
Alaabooyinka ayaa helay ku dhowaad 100 shatiyada hal abuurka qaranka iyo shatiyada wax ku ool ah, oo leh Durability Class 1, Use Class 4, Fire reactions Bfl-s1, Formaldehyde Emission E1 standard, Ansixinta iska caabbinta warqadda waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa beerta, baarkinka, hoteelka, dugsiga, guriga iyo xafiiska, dhismaha mashruuca, iwm.
REBO waxay u heellan tahay hagaajinta qoriga bamboo-sameynta iyo casriyeynta looga golleeyahay falsafada cagaaran iyo bey'ada-wanaagga ah. Sababtoo ah adkeynta sareysa ， badbaadada properties iyo waxyaalaha kale ee jir ahaaneed, bamboo xargaha goglan ayaa ah bedel wanaagsan oo dabiici ah oo WPC ah iyo alwaax dhaqameed ka hortag ah rot